Marqaanmedia|Daily News » DAAWO VIDEO:QOSOL Sir badan Xasan Sheekh maxamud Xildhibaan Lacag ku bixiyey Ee Soo baxay Xisaabinaya
DAAWO VIDEO:QOSOL Sir badan Xasan Sheekh maxamud Xildhibaan Lacag ku bixiyey Ee Soo baxay Xisaabinaya
waxa inta badan warbaahinta hadal haysey inuu madaxweynaha soomaaliya lacag badan ku bixiyey xildhibaano barlamaanka soomaaliya inay soo laabtana oo isaga tageersan.
hadaba muqaalkani cadaynaya arintaasi waxa goob fagaaro amadxweynaha somaaliya loogu sheegaya xildhibaanada tageersan ee soo laabtay.
8 Responses to DAAWO VIDEO:QOSOL Sir badan Xasan Sheekh maxamud Xildhibaan Lacag ku bixiyey Ee Soo baxay Xisaabinaya
Hanad says:	December 23, 2016 at 11:23 am	Marqaan
Webku sidii hore ayuu ku qurxoonaa.
cubeyd says:	December 23, 2016 at 1:57 pm	Kaalaya kaxoogaa lacagta Gaajayahay
Ilaahay baa hawiye kadhaliyay
Ganacsiga afrika oo dhan
Ayay gacanta kuhayaan masha alaah
Waa dad shaqaysta shaxaat mayaqaanan
Ina adeerkeey Baan xafiiska ugu
Hassan says:	December 23, 2016 at 2:38 pm	Cubayd inan gumeed Hawiye iyo iidoor wagaash midna sharaf iyo taariikh midna kuma laha. Ganacsiga waxaad utaqaanaa bililiqada iyo xaaraanta suuqa madow. Iidoor af dhogor xun baad tahaye adoo aqoonsi raadinaya ayaa suurka la afuufayaa. Adigu labadaa mitir iigu xirnow kana dhexbax afaaraha Soomaalida farakh yohoy farakhu dhalay
mingis tume@ soo dag) says:	December 23, 2016 at 3:13 pm	JAAJUUS CUBEY MAXAA KA LA HADALAYA XASAN ABGAAL XAAD DHAANTA. WALIGII HADDII AAD TIHIIN HAWIYE SOOW XAARAN KAMA DHARAGTAN
IDIIN BUUR-BUURA OO XAARAN LA CAYILA SOOW
QABRIGA IDIN SUG- MAAYO(LAA-XOWLA WALAA QUWAH, TEEDE KALE MAXAAD U BOOBTAN DADKA
AAN HAWIYE AHAYN EE MASAAKIINTA IDIN HOOS JOOGA EE ISLAAMKA AAD DISHAN KUFSATAN, BAADAN CIR WIR HADDII AAD RAG TIHIIN WIIL
MAJEERTEEN AMA WIIL MAREEXAAN AMA DAAROOD
MAXAAD UGA CABSANEYSAA IYAGAA DAGAAL IDINKA DHAXEYSA ISKA DAAYA CUBEYD XAQU NAAS CUNE DOOFAAR DOOFARKIS ISKA KEY CELI
DAY/NIGHT(balan in aan ku janno tago haddii aan xukuumada Qabsano) 100%.
cubeyd says:	December 23, 2016 at 8:17 pm	Mingis dhabe
Jaaji reer bari ayaa tahay xaqaaga
M/saleebaan ayaa cunay jabartiga
aad leedahay dagaal bay yaqaanaan
91kadib miyey dhasheen dagaal hawiye
cubeyd says:	December 23, 2016 at 8:25 pm	Hassan
Idoor wakaa jabartiga kugumaysanaya
Laska&ceerigaabo jabartigii katana
Waa kuwaa muqdisho dawarsanaya iyaga
&madaxdoodii labada magaalo hargaysa&
Muqdisho had dad katahay shaqiyad
Hadal kuuma banaana
Ahmed says:	December 23, 2016 at 11:02 pm	Hadaad wax ka doodeeysaan ama damiirleedihiin maad ka doodaan,Dameeraha uu Dameer Xasan Culusow Lacagta ka bixiyey ay Barlamaan ku sheega ku soo galeen si ay isaga Barito u soo doortaan,Hadana Villa Somaliya ugu xareeysan.
cubeyd says:	December 24, 2016 at 12:04 am	Dameeraha xasan soo iibsaday waxaa
Ugu daweyn faroole afdhasho